Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny sekretera jeneralin'ny ICAO izay voatendry dia lehilahy marina amin'ny toerana mety amin'ny fotoana mety
Ny hoavin'ny indostrian'ny fiaramanidina dia manana fanamby lehibe. Sekretera jeneraly vaovao ho an'ny vondrona iraisam-pirenena voatendry hifehy ny fiaramanidina no hanana toerana sarotra.
Ny filankevi-pitantanan-draharaha 36 an'ny International Aviation Organisation (ICAO), ny ICAO Council, dia nanendry an'Andriamatoa Juan Carlos Salazar avy any Kolombia ho sekretera jeneralin'ny fikambanana mandritra ny telo taona, manomboka ny 1 Aogositra 2021.
2) Ny sekretera jeneraly farany an'ny ICAO dia ny Dr. Fang Liu avy any Shina, izay nitana ny andraikitra roa nifanesy nanomboka ny taona 2015.
3) Ny filohan'ny Vondron-tseran'ny Seranam-piaramanidina maneran-tany dia nanao fanambarana taorian'ny fanendrena azy.
Mila pro ny hahafehy an'ity fanendrena iraisam-pirenena ity, ary Andriamatoa Salazar dia mpomba izany. Andriamatoa Salazar dia notendrena nifototra tamin'ny traikefany matihanina tamin'ny fitantanana ireo fikambanana sarotra amin'ny sehatra nasionaly, isam-paritra ary iraisam-pirenena.
Vijay Poonoosamy, mpikambana iray amin'ny birao ary filohan'ny vondrona fiaramanidina an'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany Hoy izy: “Ny Kaonsily ICAO dia tsy maintsy arahabaina noho izy nifidy an'i Juan Carlos Salazar maranitra, manana traikefa sy matanjaka ho Sekretera jeneralin'ny ICAO. Izy no lehilahy mety amin'ny toerana mety amin'ny fotoana mety. Tena reharehako i Juan Carlos ary manantena ny hiara-hiasa aminy indray mandritra ireo fotoan-tsarotra tsy manam-paharoa ho an'ny ICAO, fiaramanidina sivily iraisam-pirenena ary izao tontolo izao. ”
Andriamatoa Salazar koa dia mpisolovava mampihatra ny lalànan'ny fiaramanidina sy ny fenitra manana traikefa mihoatra ny 26 taona amin'ny fifampiraharahana iraisam-pirenena amin'ny sehatry ny fiaramanidina, ny fitantanana ary ny politikam-bahoaka.
Nanomboka ny volana janoary 2018, Andriamatoa Salazar dia nanatanteraka ny asan'ny Tale jeneralin'ny fiaramanidina sivily any Kolombia ao amin'ny Aerocivil, fikambanana fiaramanidina sivily saro-pantarina misy mpiasa maherin'ny 3,100 sy sendika 12. Izy dia miandraikitra tambajotra seranam-piaramanidina fitateram-bahoaka 72 sy mpamatsy tolotra serivisy tokana ao amin'ny firenena izay ivon-toerana lehibe ho an'ny zotram-piaramanidina any Amerika Latina. Izy koa dia niasa ho toy ny Chief Executive Officer of the Colombian Aviation Organisation ary mpanolotsaina zokiolona ny Fahefana Aviation sivily an'ny Emira Arabo Mitambatra.
Andriamatoa Salazar dia manana mari-pahaizana maîtrise momba ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny lalàna momba ny rivotra sy habakabaka ary mahay miteny espaniola, anglisy, frantsay ary ar